बिमान चड्दा चिनजान थिएन, एकै सिटमा परेपछि सामान्य कुराकानीपछि युवतीले…. हेर्नुहोस – Dainik Sangalo
बिमान चड्दा चिनजान थिएन, एकै सिटमा परेपछि सामान्य कुराकानीपछि युवतीले…. हेर्नुहोस
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १५, २०७८ समय: ११:३३:१९
भ’र्जिन अ’टला’न्टिक विमानमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले उडिरहेको विमानमा नै शा’ री’ रि’ क स’ म्ब’न्ध राखेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् । १३ मार्चमा गटविक एयरपोर्टबाट मेक्सिकोका लागि उडेको विमानमा ती महिलाले अपरिचित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानीपछि यौ’ न स’ म्ब’न्ध राखेको खबर बाहिर आएको हो ।
सो फ्लाइट ११ घन्टाको थियो । ती महिलाले अपरिचित युवालाई सुरुमा चु’ म्ब’न गरेको र त्यसपछि इकोनोमी क्लासको बाथरुममा गएर आ’ प’ त्ति’ ज’न’क क्रि’याकलाप गरेको दि सनले जनाएको छ । दुवै जना बाथरुपमा छिरेको केही समयपछि विमानका कर्मचारीले ढोका ढ कढकाएका थिए ।
जब ढोका खुल्यो त्यहाँ आ’ प’त्ति’ज’नक अवस्था देखिएको विमानका कर्मचारीले जनाएका छन् ।रो’चक त के छ भने विमानमा चढ्दा यी दुईले एकअर्कालाई चिन्दैनन् थिए । बोरिङ पास लिँदासम्म पनि दुबैबीच परिचय भएको थिएन । विमानका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ती महिना र” क्सी पि’ ए’र विमानमा चढेकी थिइन् । उनीसँग बसेका ती व्यक्तिले भने, ‘उनी सबैसँग फ्रे’न्ड्ली भएर बोल्दै थिइन् ।
म र मेरो साथीसँग कुरा गर्ने कोसिस गरिन् । त्यसपछि विमानमा हिडिरहेका एक व्यक्तिसँग कुरा गर्न थालिन् । तत्काल ती अपरिचितलाई चु म्न थालिन् । केही समयपछि उनी बाथरुममा गइन् । ती युवक पनि पछि पछि गए ।’त्यसपछि बाथरुममा के भइरहेको छ भन्ने कुरा विमानमा यात्रा गरिरहेका यात्रुले अन्दाज गर्न सक्थे किनकि ती महिला च र्को आवाज निकालिरहेकी थिइन् ।
Last Updated on: December 30th, 2021 at 11:33 am